समाचार - कीटाणुनाशक वाइपहरू
महामारी अझै चलिरहेको छ। यो एक युद्ध हो जसमा सबैले भाग लिइरहेका छन् तर त्यहाँ गनपाउडर छैन। उनीहरूले सक्दो सकेसम्म फ्रन्ट लाइनलाई टेवा पुर्‍याउनुको साथसाथै, साधारण मानिसहरूले आफुलाई जोगाउनु पर्छ र संक्रमणबाट जोगिनु पर्छ, महामारीलाई आफैंमा हुनबाट रोक्नु पर्छ, र अराजकता उत्पन्न नगर्नु पर्छ।
ब्याक्टेरियाको प्रसारको तीन ज्ञात तरिकाहरू छन्: मौखिक तरल पदार्थ, थोपा र सम्पर्क प्रसारण। पहिलो दुई लाई मास्क र गग्गल लगाएर प्रभावकारी रूपमा रोक्न सकिन्छ, तर सब भन्दा सजिलै उपेक्षित सम्पर्क ट्रान्समिशन हो!
भाइरसको अप्रत्यक्ष प्रसारबाट बच्न, आफ्नो हातहरू बारम्बार धुनुहोस्, कीटाणुनाशक गर्नुहोस्, र तपाईंले छुनु पर्ने चीजहरूको कीटाणुशोधन गर्नु सबैभन्दा प्रभावकारी रोकथाम उपाय हो।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको उच्चस्तरीय विज्ञ समूहका सदस्य एकेडेमिशियन ली लान्जुआनका अनुसार et 75% इथेनोल कीटाणुशोधनले प्रभावकारी रूपमा जीवाणुहरू हटाउन सक्छ। नयाँ कोरोनाभाइरस मदिरासँग डराउँछन् र उच्च तापमानमा प्रतिरोधी हुँदैन।
तसर्थ, दैनिक स्पर्श गर्नु पर्ने स्थानहरू कीटाणुरहित गर्न 75 75% रक्सीको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ! किन% 75% एकाग्रता आवश्यक छ? लोकप्रिय विज्ञान:
यसको कारणले कि अल्कोहलको एकाग्रताले ब्याक्टेरियाको सतहमा एक सुरक्षात्मक फिल्म गठन गर्दछ, यसले ब्याक्टेरिया शरीरमा प्रवेश गर्नबाट रोक्छ, र ब्याक्टेरियाहरूलाई पूर्ण रूपमा मार्न गाह्रो हुन्छ।
यदि मदिरा एकाग्रता धेरै कम छ, यद्यपि यसले ब्याक्टेरियामा प्रवेश गर्न सक्दछ, यसले शरीरमा प्रोटीन जम्मा गर्न सक्दैन, न त यसले ब्याक्टेरियाहरूलाई पूर्ण रूपमा मार्दछ।
प्रयोगहरूले प्रमाणित गरे कि% 75% रक्सीको राम्रो प्रभाव छ, कम वा कम!
दैनिक एन्टि भाइरस कार्य गर्नुहोस्! यो बिन्दु एकदम महत्त्वपूर्ण छ!
आज, सम्पादक सबैको लागि एक राम्रो दैनिक कीटाणुशोधन उत्पादनको सिफारिश गर्दछ।
% 75% रक्सी समावेश गरेको वाइन्स्फेक्टि w्ग वाइपहरू।
यस मदिराले वाइपले केवल नयाँ कोरोनाभाइरसलाई रोक्न सक्दैन, तर ई कोलाई र क्यान्डिडा अल्बिकान्स जस्ता रोगजनक ब्याक्टेरियाहरूको लागि पनि उपयोगी छ!
यसले 75 75% रक्सी मात्र प्रयोग गर्दैन, तर प्रयोग गरिएको पानीलाई पनि धेरै चोटि उपचार गरिएको छ र शारीरिक बाँझो बनाउन सकिन्छ!
शेन्जेन स्वास्थ्य आयोगका अनुसार फेब्रुअरी १ ​​मा लीभर रोगको इन्स्टिच्यूट शेन्जेन तेस्रो पीपुल्स अस्पतालले पत्ता लगायो कि नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित निमोनिया भएका केही बिरामीहरूको मलले नयाँ प्रकारको कोरोनाभाइरसको सकारात्मक परीक्षण गरेको छ। बिरामीको मलमा लाइभ भाइरस हुन सक्छ।
त्यसकारण, तपाई शौचालय जानुहुँदा संक्रमित भएकोमा पनि ध्यान दिनुहोस्। यो मदिरा वाइपले प्रभावकारी ब्याक्टेरियाहरू मेटाउन सक्छ जुन साधारण शौचालय कागजले हटाउन सक्दैन, जुन एक रोकथाम विधि पनि हो!
अर्को शब्दहरुमा, बुँदाहरू रोक्नको लागि मास्क लगाउनुको साथसाथै, हामी पनि होसियार हुनु पर्छ कि भाइरस हातमा छ, हाम्रो आँखा मलाउँछ, नाक लिन्छ, र मुख छोए संक्रमण हुन को लागी र फैलिन को लागी।
यदि हामी बाहिरबाट फर्क्यौं, यदि हामी मास्क लगाउँदछौं, हाम्रो कपडा र कपाल अझै भाइरसबाट दूषित हुन सक्छ। महामारीको समयमा, घर बाट फिर्ता आउनु उत्तम हुन्छ। सम्पूर्ण शरीर परिवर्तन गर्न, धुने, र सबै कीटाउन सक्ने गर्न सकिन्छ।
विशेष गरी हाम्रो हात, हामी बारम्बार आफ्नो हात धुनुपर्छ!
यो एउटा यस्तो पोइन्ट हो कि% ०% व्यक्ति सजिलै बेवास्ता गर्दछन्;
नयाँ कोरोनाभाइरसको सुरक्षाका बारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएको सिफारिसहरूमध्ये पहिलो, हात धुनु हो।
अन्तमा, म विश्वलाई सुरक्षा र स्वास्थ्यमा चाँडो फर्कने इच्छा गर्दछु।